Xaradaka Al-Shabaab oo Xalay Dagaal Ku Qaaday Deegaanka Garille Ee Gobolka Gedo – STAR FM SOMALIA
Xoogag hubeysan oo la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin Ururka Al Shabaab, ayaa xalay weerar culus ku qaaday Deegaanka Garille Ee Gobolka Gedo. Deegaankaasi wuxuu ku dhow yahay xuduuda Kenya.
Xoogagan, ayaa weeraray fariisimo ay Ciidamada Dowladdu ku lee yihiin Deegaankaasi. Dagaalka oo dhacay saqdii dhexe ee xalay, ayaa waxaa mintisiinta u suurta gashay inay la wareegan gacan ku haynta Garille.
Wararka, ayaa waxay intaa ku darayan in weerarkaasi lagu dilay Taliyihii Ciidanka Dowladda ee aaggaasi, Gaashaanle Cabdi Xuseen Ibraahim (Xawaadlow).
Dadka Deegaanka, ayaa soo sheegaaya in Shabaabku ay dab qabadsiiyen saddex ka mid ah gaadiidka Ciidamada Dowladda, xilli ay ku qabsadeen weerarka ay ku galeen Garille.
Mintidiinta, ayaa kol dambe isaga baxay Deegaankaasi, waxaana dib ugu soo laabtay Ciidamada Dowladda, oo hadda la soo sheegaayo inay ku sugan yihiin halkaasi.
Weerarkan, ayaa qayb ka ah weerarada ku dhufada ee ka dhaqaaqa ee Shabaabku xilliyada qaarkood ka gaystaan Gobolada Koonfurta & Bartamaha Somaliya.